Iindidi zebhulukhwe zamadoda | Amadoda aQinisekileyo
Ibhlukhwe yamadoda yingubo egqiba isimbo lomntu. Kubonakala ngathi ijongeka ngathi iyintoni, iibhulukhwe ezimbalwa ezilula, kodwa ngasemva kukho izitayile, ukusika okwahlukeneyo kunye neemilo ezibanika ubuntu obahlukileyo kwabanye. Kungenxa yoko le nto kukho iifashoni kwaye kukho iimilo zazo zonke izinto ozithandayo kunye neentlobo zomzimba.
Ngoku konke okufuneka ukwenze kukukhetha ibhulukhwe ehambelana kakhulu nesitayile sakho okanye incasa yobuqu. Ngokuqinisekileyo ucinga kwisitayile esiqhelekileyo, eyinxalenye yefashoni kodwa ebonakala ngathi inobuhlakani ngakumbi kwabanye. Kule nqaku senza ukudityaniswa kwazo zonke iintlobo zeebhulukhwe ezikhoyo, uyilo lwazo, ukusika ... kwaye loluphi uhlobo lomzimba abanokuziqhelanisa nalo.
1 Iindidi zebhulukhwe zamadoda
1.1 Uhlobo lomkhosi okanye lwaseTshayina
1.2 Ijini okanye ijini
1.3 Iibhulukhwe ezifakwe emanzini
1.4 Uhlobo lokubaleka
1.5 Iibhulukhwe ezivuthayo
1.6 Iibhulukhwe zelizwe
2 Iindidi zokusikwa kweebhulukhwe
3 Iindidi zomzimba wamadoda kunye nesimbo ekufuneka beyinxibile
Uhlobo lomkhosi okanye lwaseTshayina
Alithandabuzeki elokuba enye yeebhulukhwe ezinxibe kakhulu ngalo lonke ixesha. Zezona ndlela zilungileyo zokunxiba ngobuhle kunye nokuqonda kwaye kunye nejean bezisoloko zinxitywa kakhulu ngamadoda. Uyilo lwayo lwaluqulunqwe lwangubo yohlobo lwezemidlalo, kodwa namhlanje isimbo sayo sidibanisa ngokukuko neehempe zohlobo lweOxford kunye neehempe zohlobo lwepolo. Baye bathandwa kangangokuba uLevi ade wayila eyabo i-chinos phantsi kwegama leDockers.
Ijini okanye ijini
Luhlobo lweebhulukhwe eyaziwayo, abanxibe kakhulu kwaye abathengisi abathengisayo Olu hlobo lwengubo lunxitywa phantse lulo lonke uhlobo lobuntu kunye nemeko, kwaye ayisiyonto incinci, kukho imibala kunye neemilo zazo zonke izinto ozithandayo.
Iibhulukhwe ezifakwe emanzini
Yeyona ibhulukhwe yesiqhelo, esetyenziswa kakhulu amashumi eminyaka. Babenazo zabo Ixesha lobungangamsha emva kwii-80s apho ubunokubona khona isitayile sakhe sendawo esinqeni kwaye uqokelele ngemijelo. Uhlobo lwabo lubakhokelela ekubeni badityaniswe neehempe zaluphi na uhlobo, iihempe kunye neevesti kwaye, ukuba kunokwenzeka, ngaphakathi iblukhwe.
Olu hlobo lweebhulukhwe luqhelekile kula maxesha. Ngobunjani bayo, intuthuzelo ifunwa, okoko Yenziwe ngamalaphu akhethekileyo kwezemidlalo, kodwa inesimo esimema ukuba sihanjiswe kuwo nawuphi na umsitho. I-silhouette yayo ibanzi kwaye i-ankle yayo ihlengahlengisiwe kwaye iyamenywa ukuba yenziwe ngamalaphu afana ne-corduroy okanye uboya kuba idibene kakuhle nehempe nezihlangu.
Zibhulukhwe ezivuthayo eziye zanemfashini ngamanye amaxesha. Imilenze yabo ihlala ibanzi ngakwicala elisezantsi lebhlukhwe kwaye yiyo loo nto bethatha ubume bentsimbi.
Yifashoni yangoku, ukufumana olu hlobo lwesinxibo olwenza ukuba lube lodwa. Ziyimpahla yemidlalo eyahlukeneyo ukuze isetyenziswe nakweyiphi na imisitho kwaye amadoda angayinxiba ngobuhle. Iyahluka kuba ungayithatha uye nayo emsebenzini, uhambe okanye uye kwiiklasi zakho, nasejimini uqobo. Zizibhulukhwe eziye zaba yinxalenye yengubo ebalulekileyo kuyo yonke into, kuba ukusikwa kwabo kuyilelwe ngobuhle.
Iindidi zokusikwa kweebhulukhwe
Ngokuthe tye: Ungababona kwiibhulukhwe ezinelebheli "ngqo". Basikiwe ngokuthe tye, apho loo mgca ugcinwa khona esinqeni ukuya ezantsi kwebhulukhwe. Ngubani owakhuthaza olu hlobo yayiludumo oludumileyo lweLevi kunye nemodeli yayo yesiko 501.
Umdiza: Yenye yeendlela, kuba bathatha indawo yokuqala kwabafazi kwaye kamva emadodeni. Uhlobo lwakhe lubetha kanzima, zifakwe ukusuka esinqeni ukuya emaqatheni, kwaye ngale ndlela ibenza ukuba babe sesikweni, kodwa kwangaxeshanye babe bahle. Ilungele amadoda amade anemilenze yemisipha.
Ububanzi: Olu hlobo lubanzi kakhulu, iqala ngommandla obanzi wempundu, icandelo lomlenze othe nkqo kwaye ububanzi lilungu elisezantsi. Ngenxa yokukhululeka kwayo, ikhululekile kakhulu kwaye ilungele abantu abanentuthuzelo enkulu.
Ukunyuka okuphezulu kunye nokunyuka okuphantsi. Yindlela yokubiza le ukusika okwenziwe kwinxalenye yenyonga. Ubume bayo bufakwe esinqeni, kodwa umpu ungaphakama, ufike esinqeni; okanye ukunyuka okuphantsi kufikelela kwindawo yenyonga esezantsi.
Iindidi zomzimba wamadoda kunye nesimbo ekufuneka beyinxibile
Umzimba onxantathu: amagxa abo abanzi, anezinqe ezixineneyo kwaye imilenze ethe nca okanye yemisipha. Ingcebiso yile iibhulukhwe ezinqeni eziphezulu ezinokulingana okuthe tye kwaye okubhityileyo. Imizimba engunxantathu eguqulweyo ibhulukhwe emfutshane ebhegini.
Okoxande umzimba Ubume bayo abunamagophe, nobubanzi begxalaba elifana nelo leemvubu, ezinqeni elincinci kunye nemilenze emide. Olu hlobo lomzimba luxhasa uhlobo olunye ijini ebhityileyo okanye ethe nkqo.
Umzimba omile weRhombus: Ubume bomzimba bobubanzi obuncinci ezinqeni nasemagxeni, kodwa ngevolumu yesisu. Uhlobo lwakho olufanelekileyo kukukhetha ibhulukhwe evuthayo nengqokelela yemijelo esinqeni.
Umzimba ovali: i-anatomy yayo isetyhula emzimbeni ngesisu esincinci kunye nemilenze ebhityileyo. Uhlobo olufanelekileyo lokusika ngu ibhulukhwe eqondileyo ukufezekisa ibhalansi ebonakalayo.
Umzimba omile okweeperile: amagxa akhe amxinwa kwaye isinqe sakhe sibanzi. Ufuna isitayile se ijee ezisikiweyo ezichanekileyo ukufihla igophe lomlenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iindidi zebhulukhwe zamadoda